बलिउडका चर्चित संगीतकर्मी वाजिदको ४२ वर्षमा निधन, कोरोनाको आशंका - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com बलिउडका चर्चित संगीतकर्मी वाजिदको ४२ वर्षमा निधन, कोरोनाको आशंका - खबर प्रवाह
बलिउडका चर्चित संगीतकर्मी वाजिदको ४२ वर्षमा निधन, कोरोनाको आशंका
बलिउडका चर्चित संगीतकर्मी वाजिद खानको आइतबार अबेर राती निधन भएको छ । चर्चित गायक सोनु निगमले उनको मृत्यु ट्वीटरमार्फत् पुष्टि गर्दै लेखे, ‘मेरो भाइ वाजिदले हामीलाई छोडेर गए ।
संगीतकर्मी सलिम मर्चेन्टले भारतीय सञ्चारमाध्यम पीटिआईलाई भने, ‘उनलाई थुप्रै समस्या थियो । उनको मृगौलामा समस्या थियो र केही समय अघि मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । तर उनलाई केही समय देखि मृगौला संक्रमण देखिएको थियो । स्थिती बिग्रिएपछि उनी पछिल्लो चार दिनदेखि भेन्टिलेटरमा थिए । सुरुमा मृगौला संक्रमण देखियो त्यसपछि स्थिती क्रिटिकल भयो । ’
इन्टरटेन्मेन्ट जर्नलिस्ट फारिदुन सर्यारले वाजिदको मृत्यु कोभिड–१९ का कारण भएको ट्वीटमार्फत् जानकारी दिएका छन् ।
कागजातविहीन नेपाली श्रमिकलाइ मलेसियाबाट फर्काइने
भारतबाट फर्केका मानिस बाेकेकाे बस ट्रकसँग ठाेक्कियाे : ११ काे मृत्यु, २२ जना घाइते
ओलीलाई छाडेर प्रचण्ड – नेपाल कित्तामा उभिए बादल
बालुवाटारबाट अपमानित भएर निस्किए प्रचण्ड
पूर्व एमाले पक्षधर नेकपा नेता भन्छन्- प्रचण्डले साथ नदिएको भए विद्या भण्डारी राष्ट्रपति र ओली प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव थिएन
नेकपाका जति नेता पदमा पुगेका छन्, ती सबै प्रचण्डले पुर्‍याएका हुन् : रामकुमारी झाँक्री
प्रचण्ड-नेपाल पक्षद्वारा आक्रामक तयारी
नेकपा फुटिसक्याे, पूर्वमाओवादी आफ्नाे बाटाे लाग्दा हुन्छ : गाेकुल बाँस्कोटा
भारती सिंहको जमानत खारेज गर्न एनसीबीको अपिल
नाकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ले एनडीपीएस कार्ट (मादक पदार्थ निषेध कानूनलाई आधार बनाएर काम गर्ने अदालत) मा हास्यकलाकार भारती सिंह र उनका श्रीमानको जमानत खारेज गर्न अपिल गरेको छ । भारती सिंह र उनका श्रीमानलाई २१ नोभेम्बरमा एनसीबीले पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला एनसीबीले भारती सिंहको घरमा भएको छापामारीमा ८६.५ ग्राम गाँजा बरामद भएको बताएको […]
भारती सिंह र उनका श्रीमान् जमानतमा रिहा
हास्यकलाकार भारती सिंह र उनका श्रीमान् हर्ष लिम्बाचियालाई मुम्बईको एक अदालतले जमानत दिएको छ । दुबैलाई १५–१५ हजार जमानत लिएर छाडिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन् । सुशान्त सिंह राजपूतको मामिलामा ड्रग्सको कुरा सार्वजनिक भएपछि फिल्म र टिभी जगतका विभिन्न हस्तीलाई नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ले सोधपुछ गरिरहेको छ । एनसीबीले नयाा सिलसिलामा चर्चित […]
अर्बौंकी मालिक हुन् हेमा मालिनीः थाहा पाउनुहोस् कतिको हो बंगला र गाडी ?
बलिउड नायिका हेमा मालिनीले फिल्मबाट निकै नाम कमाएकी छिन् । अहिले उनी राजनीतिमा सक्रिय छिन् । हेमा लामो समयदेखि भारतीय संसदकी सदस्य हुन् र अहिले मथुराबाट सांसद हुन् । हेमा मालिनीले बलिउडलाई थुप्रै हिट फिल्म दिएकी छिन् र ड्रिम गर्लबाट चर्चित नायिका राजनीति जगतमा पनि लगातार अघि बढिरहेकी छिन् । यदि नायिकाको सम्पत्तिको कुरा गर्ने […]
एजेन्सी । भारतीय फिल्म अभिनेता सञ्जय दत्त अस्पताल भर्ना भएका छन् । अभिनेता दत्त मुम्बइएको लिलावती अस्पतालमा शनिबार भर्ना भएका हुन् । ६१ वर्षीय अभिनेता दत्तलाई शरीरमा अक्सिजनको कमी भई अस्वस्थ भएलगत्तै अस्पताल भर्ना गरिएको हो । अस्पताल भर्ना गरिएलगत्तै उनको कोभिड १९ परीक्षण गरिएको छ । कोभिड १९ को नतिजा नेगेटिभ आएको छ । […]
नयाँ कमेडी कार्यक्रम लिएर आउँदै सुनील ग्रोवर
बलिउड तथा भारतीय टिभी कलाकार सुनील ग्रोवर फेरि टिभीमा कमेडी कार्यक्रम लिएर फर्किने भएका छन्।हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार सुनीलले कोरोना महामारी बीच मान्छेहरूलाई हँसाउन यो कार्यक्रम ल्याउन लागेका हुन्। नयाँ कमेडी कार्यक्रमबारे सुनीलसँग कुरा गर्दा उनले भनेका छन्, ‘मलाई अब कोरोनाको खोप बनाउन त आउँदैन। तर मान्छेहरूलाई मनोरञ्जन दिन पक्कै आउँछ। त्यसैले म यही गर्नेवाला छु।’त्यस्तै […]
बलिउडका यी ४ अभिनेताले विवाहमा ह्याट्रिक गरे !
तपाईलाई लग्न सक्ला कि जीवनमा एकपटक विवाह गरे त भैहाल्यो नि? हाम्रो समाजमा एकपटक विवाह गर्दा अग्नि साक्षि राखेर सात जन्म सँगै रहने कसम खाइने गरिन्छ। तर बलिउडमा यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन् ,जसले एक पटक हैन, दुई पटक हैन ३ पटक सम्म पनि विवाह गर्न भ्याएका छन्। आज हामी ति मध्य केहि व्यक्तिको बारेमा चर्चा […]
ओलीले ‘टाइम बाइ’ गर्दा यस्तो छ प्रचण्ड-नेपाल पक्षको तयारी
प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको सुझाव : बहुमतबाट निर्णय नगर्नुस्, पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनुस्
बाबुरामको प्रश्नः पार्टीका समस्या लिएर राष्ट्रपतिकहाँ धाउने कुरा संविधानको कुन धारा अन्तर्गत हो ?
ओलीले पार्टी फुटाउने तयारी गरेका छन् : वामदेव गौतम
२०७७ साल मंसिर १९ गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल
प्रधानमन्त्रीको नयाँ रणनीति: यस्तो छ अबको तयारी
एकाएक किन पुगे प्रचण्ड राष्ट्रपति निवास ?
बालुवाटारबाट यसरी फैलाइयो ‘प्रचण्ड ब्याक’ भएको झुटो हल्ला
प्रचण्डको प्रस्ताव: ओलीसहित सबै नेताको स्वदेश विदेशमा सम्पत्ति छानबीन गरौं